Digniin culus; iska jir inaad badsato cuntooyinkaan waayo waxaa laga qaadaa cuduro halis ah sida Kansarka. – Filimside.net
Digniin culus; iska jir inaad badsato cuntooyinkaan waayo waxaa laga qaadaa cuduro halis ah sida Kansarka.
Aduunkaan aynu ku noolnahay noolaha kor saran wuxuu ku noolyahay misna tamarta uu u baahanyahay ka qaataa Cuntada.
Markii qofka cunto cuno waxay cuntadaas jirkiisa siineysaa tamarta uu jirka u baahanayahay asigoo awood u yeelanaayo qofkka inuu shaqeeyo.
Hadii ay dhacdo in qofka uusan wax cunto cunin waxay lamid tahay inuusan tamar heynin taasoo soo dadajineyso inuu geeriyooda waayo cunto la’aan cidina ma noolaan karto.
Aduunkaan waxaa jiraan cuntooyin badan oo la adeegsado qaarkood caafimaad ahaan jirka u roonyihiin sidoo kalana daawo yihiin waxaana ka xusi karnaa Sanjabiisha iyo Malabka oo faa’iidooyin badan leh sidaas oo kale waxaa jiraan cuntooyin cuduro laga qaado qaarkoodna islaamka xarimay maadaama aysan caafimaadka qofka u rooneyn sida hilibka doofaarka iyo Khamriga.
Hadaba waxaa kale oo jiro cuntooyin caadi ah kuwaas oo uusan islaamka xarimin waxayna u badanyihiin cuntooyinka casrigaan cusub kuwaasoo loo yaqaano cuntooyinka fudud ee aan dabka badan soo marin (FASTFOOD).
Sidaan wada oganahay cuntada karinta wey bisleysaa macaaneysaa cuduradana wey ka dishaa waxaase waayahaan dambe soo baxay cuntooyin si fudud lagu kariyo qaarkoodna kiimiko badan ka buuxaan sida cuntooyinka la bacrimiyay si ay u bataan iwm.
Cuntooyinka ay kamid yihiin Pizzaha, Humbergarka, Buskutka, iyo Keega iska ilaali inaad badsato waayo waxay sababaan cuduro ay kamid yihiin Kansarka, Sokorta iyo dhiiga oo qofka kaca.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail cunista badan ee cuntooyinka ayaa dhibaato caafimaad kuu keeni karo lagama hadlaayo inaad cuntooyinka marmar cunto ee waxaa laga hadlayaa inaad joogto ka dhigato taasoo aanan marnaba caafimaadkaaga u rooneyn.